Topnews:-Daraasada British Institute oo lagu sheegay in Wasiirad Fowsiya Somaliland u aqoonsan tahay dal madaxbanaan"lama hayo meel ay ku bedeshay mawqifkeedaa Somalilandnimo
Topnews:-Daraasada British Institute oo lagu sheegay in Wasiirad Fowsiya Somaliland u aqoonsan tahay dal madaxbanaan"lama hayo meel ay ku bedeshay mawqifkeeda Somalilandnimo
07 Febraury 2013 Waagacusub.com- Joornaalka East African Studies oo uu soo saaro mac-hadka guunka ah ee British Institute in Eastern Africa oo daraaseeya arrimaha bariga Afrika ayaa cadadkiisii 22kii bishii hore ee Jeenaweri 2013ka ku daabacay maqaal dheer oo ay arrimaha Soomaaliya ku lafa gurayso Laura Hammond oo ka tirsan jaamacadda London ee dalka Ingiriiska. Laura oo 23kii sano ee ka dambeeyey sannadkii 1990kii daraasaado qoto dheer ka samaynaysay dagaallada, tahriibka, qurbo-joogga iyo guud ahaanba xaaladaha gobolka Geeska Afrika, maqaalkeedan waxa ay cinwaan uga dhigtay. Soo hinqashada Soomaaliya: Waxaa isa soo beddelaya xaaladaha dalkii muddada dheer dunida ugu tirsanaa dalalka guul darraystay. Waxa aanay kaga hadashay is bedellada hadda ka socda Soomaaliya, iyada oo si gaar ah u eegaysa halka uu is-beddelkani ka yimi iyo caqabadaha hor yaalla Soomaaliya iyo dawladdeeda cusub.
Maqaalkan dheer oo uu Wargeyska Geeska Afrika soo akhriyey ayuu qaybihiisa Somaliland khuseeyey af Soomaali ugu soo turjumay akhristayaashiisa.
Laura oo ka hadlaysa caqabadaha hor yaalla dawladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fowsiya Xaaji Aadan ay saamayn weyn ku yeelan doonto natiijada laga filan karo wada hadallada labada dhinac, waxa aanay xustay in magacaabistii Fowsiya Xaaji Aadan loo magacaabay xilka muhiimka ah ee Raysalwasaare ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha dibadda ay ka dhalatay jawaab celin xiise badan. ?Dad badan ayaa aad u xiisaynaya natiijada laga filan karo wada hadallada Maamulka Somaliland iyo Dowladda Soomaaliya kaga arrinsanayaan xidhiidhkooda mustaqbalka ee ay hoggaamin doonto Fawsiya oo ka soo jeedda Somaliland? ayey ku tidhi qoraalkeedan. Iyada oo intaas ku sii dartay, ?Arrintani waxay inagu hagaysaa in aynu si gaar ah u eegno, su?aasha muhiimka ah oo noqonaysa, sida ay dawladda Federalka ah ee Somalia ula macaamisho qadiyadda Somaliland? Waxay ku xidhan tahay sida Wasiirka arrimaha dibaddad Soomaaliya Fowsiya Xaaji Aadan ula macaamisho arrintan, iyada oo sii waddana waxa ay qoraalkeedan ku tidhi, ?"Fowsiya hore waxaa loogu arkayey inay tahay wadaniyad Somaliland ah, illaa hadda oo aan maqaalkaygan qorayana (January 2013) lama hayo meel ay ku beddeshay mawqifkeedaa hore ee Somalilandnimo"? Waxa qoraalku intaas ku sii daray in Fowsiya maalintii loo magacabay xilka Soomaaliya, ay tidhi, ?"Somaliland waa dalkaygii, Soomaaliyana waa dalkaygii, labaduba waa dalkaygii, labadabana ka mid ayaan ahay"? arrintaas oo u dhadhamaysa in ay Somaliland iyo Soomaaliya u dhigayso in ay yihiin laba dal oo kala madax bannaan. Sidoo kale Fowsiya weli ma caddayn mawqifkeeda ku waajahan in Soomaaliya hal dal tahay iyo inay ogolaato madax bannaanida Somaliland. Tallaabadaas oo haddii ay taageerto ay kaga cadhoon doonaan dad badan oo aaminsan in maamulka woqooyiga ka jiraa uu ka mid yahay dawladda Soomaaliya. Dhinaca kalana haddii wasiir Fowsiya ay hadda qaadato fikirka midnimada, Somaliland waxay u arki doontaa inay tahay khaayinul wadan, waxaana suurtogal ahba inay taasi horseeddo khalkhal ku yimaadda xidhiidhka nabdoon ee hadda u dhexeeya labada dhinac.
Saddexda Cabaqabadood ee kale ee ay Laura ku sheegtay in ay hor yaallaan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ah:
1. Maamul fidinta, iyo inuu dawladda gaadhsiiyo dhulka miyigga ah oo hadda ay Alshabaab ka arrimiso.
2. Xallinta muranka u dhexeeya dawladdiisa iyo xoogagga ka arrimiya magaalada Kismaayo oo doonaya in ay dhisaan maamul goboleed, madaxweynahana ku canaananayo inuu qadiyaddooda ku eegayo indho eexi ka muuqato oo ka duwan kuwa uu ku eegayo maamul goboleedka Puntland,Galmudug iyo Somaliland.
3. Hab-maamulka maamul-goboleedada: Xaalad xidhiidh la leh Kismaayo balse ka yara duwan ayaa ah in xukuumaddan looga fadhiyo sida ay u gasho maamulka iyo nidaaminta maamul-goboleedada tirada badan, sida Jubland, Ximan iyo Xeeb iyo kuwo kale oo badan. Taas oo dhinaca kalana jaan-goyn u noqon doonta la macaamilka maamulka Kismaayo ee taageerada badan ka haysta dalka Kenya.
Madaxweynaha Somalia inuu eex gelayo waxaa Marqaati looga dhigi karaa Warqad uu Wasiirka Arrimaha Gudaha Siiyay nin ka mida dagaal oogayaasha Somalia Cabdi Xasan Cawale Qaybdiid taas oo bulshada shaki gelisay maadama isweydiintu tahay sababta uu ku diiday in Axmed Madoobe Madaxweyne ka noqdo Jubbaland ,una doortay in Qaybdiid degaan Maamul ka jira ugu magacaabaan inuu Madaxweyne ka noqdo.
Ugu dambayntii Laura Hammond waxa ay sheegtay in mid kasta oo caqabadahan ka mid ahi ay iskeed u tahay arrin muhiim ah oo saamayn ku leh guul ay gaadho dawladda cusub ee Soomaaliya, taas oo haddii aanay xukuumadda Xasan Sh. Maxamuud si habboon u gelin keeni karta in xamaasaddii dawladda cusub loo qabay si xun u dhaawacanto